Ajụjụ - Shandong New Ankai-Kitco Co., Ltd
1.what bụ ngwaahịa uru?
New nk CNC slitting akpaka lathes (CNC agbalị) nhazi ọzọ nkọwa nke moto na synchronous n'usoro ndu aka uwe imewe, nwere ike ike na-akwado arịa, melite nhazi rigidity, hụ na machining ziri ezi ma na-ekpeghachi nkenke; The igwe ngwá ọrụ na-onwem na transverse na azụ ọgwụgwụ ike ngwaọrụ.
Dị otú ahụ igwe ngwaọrụ kwesịrị inwe ndị na-esonụ isi atụmatụ:
1. Ike naa-egwe ọka ike: n'ihi na ọkpụkpụ ịghasa, ịghasa, irighiri, ịghasa ụdị akụkụ, ọ dị mkpa iji hazie ihe elu-nkenke gburugburu uzo, na n'elu roughness nke gburugburu uzo mkpa iru ra0.8mm.
Mkpa maka igwe ngwá ọrụ ngagharị usoro, elu ziri ezi na ezi na-akpa ike kwụsie ike na eri SX325 CNC gaa niile site na mpụta ike akụkụ nke tinye a oké ifufe-egwe ọka ngwá ọrụ, transverse ike ngwá ọrụ site na cutterhead mbanye ike alloy cutter elu-ọsọ adiana (isi), igwe ngwá ọrụ spindle drive artifact ngwa ngwa adiana (inyeaka), Z1 aro dika workpiece pitch ma ọ bụ na-edu ndị na workpiece axis ije (oriri ije), a oké ifufe-egwe ọka X1 ngagharị (ịcha ije) elu arụmọrụ machining elu kpọmkwem helical uzo.
2. High rigidity ụgbọala na-egwe ọka mejupụtara nhazi ike:
e sere ese otu maka ngwa ke nkwukọrịta, ezinụlọ ngwa, ngwá electronic, ụmụaka ndị ọzọ ọrụ nke nnukwu dayameta nkọwa nke akụkụ na mmiri, mgbagwoju usoro, elu ziri ezi, na-achọ mgbagwoju machining nke ugbo ala, egwe ọka ma na mgbanwe, SX325 CNC gaa niile dị ike na ụgbọala,-egwe ọka, nwere ike nhazi size. Traditional nhazi usoro bụ iji space akara lathe ma ọ bụ igwe, mkpọpu ala igwe, machining center igwe ngwaọrụ, na-arụ ọrụ usoro nhazi na-agwụ agwụ, bụ ngwá ọrụ nke ukwu nke ina, mmepụta arụmọrụ bụ ala, na machining nkenke nke workpiece akụkụ mgbe nke abụọ clamping bụ siri na-ekwe nkwa.
Eserese otu: nkwurịta okwu, ezinụlọ ngwa, ngwá electronic, ụmụaka ụlọ ọrụ typical akụkụ (32 mm n'obosara na 20 ka Ф Ф)
SX325 mbịne,-egwe ọka, CNC gaa niile nwere nnukwu rigidity na otu oge clamping nwere ike isi nweta elu isi nke ụgbọ ala cylindrical workpiece, endface, eri, ịcha uzo, bipu na kwụ-egwe ọka, mkpọpu ala, na ịme ọpịpị na ọgwụgwụ ihu bipu mgbe azụ ọgwụgwụ nke mkpọpu ala, na ịme ọpịpị, na-agwụ ike na ndị ọzọ na ọtụtụ ihe mejupụtara nhazi ike.
3. nhazi ike nke nkenke gịrịgịrị aro akụkụ:
fig. 2 bụ a elu kpọmkwem na gịrịgịrị aro haịdrọlik, akpaaka akụkụ, ọgwụ, ụgbọelu, aerospace na ngwa anya ọrụ.
Ọgụgụ 2: haịdrọlik, akpaaka akụkụ, ọgwụ, ụgbọelu, aerospace, ngwa anya ụlọ typical akụkụ (32 mm n'obosara na 20 ka Ф Ф)
Ọ bụ nnọọ ike iji hazie ihe ndị dị gịrịgịrị aro akụkụ na ogologo / n'obosara ruru n'elu 6, na nkenke na arụmọrụ na-esi ike na-ekwe nkwa. New nk CNC slitting akpaka lathes (CNC ije niile) n'ihi na ihe pụrụ iche nhazi technology dị ka elu-ọsọ synchronous ndu ohia, workpiece na ịcha ngwá ọrụ akụkụ mgbe niile na-akwado site na ndu aka uwe, ka nwere ike mfe esichara n'obosara site 5 ~ 32 mm, ogologo n'ime 280 mm ultra gịrịgịrị aro akụkụ.
2) ọsọ / ọnọdụ loop nzaghachi adopts ọhụrụ ọcha dị ka ewu na-elu mkpebi ji kpachie oghere ma ọ bụ magnetik, nke nwere elu akara nkenke nke rotary na nzaghachi.
3) na ihe banyere abụọ spindle Ọdịdị, zuru usoro nhazi na dechara na otu oge, na-ebelata arụmọrụ na nkenke nke workpiece ruru sekọndrị clamping, ma rụọ ọrụ ndị machining arụmọrụ.
Karịa 4) multi-axis akara na multi-axis linkage teknụzụ iji kwalite ikike nke igwe ngwá ọrụ ya emepụta mgbagwoju anya akụkụ na machining arụmọrụ, igwe ngwá ọrụ akara aro asaa axis, ọnụ ọgụgụ nke ike ngwá ọrụ na ike ngwaọrụ ọnụ maka ihe karịrị 20 .
5) ọgaranya akpaaka nhazi, na-aghọta ihe mgbaru ọsọ nke otu onye ihe igwe na ime management, na mgbakwunye na nke omenala mmanya ebu, mgbawa mwepụ ngwaọrụ-ya nile, dị ka ogologo / obere workpiece ihe workpiece erite, akpaka ngwá megide mma, ọgụgụ isi njirimara, workpiece akpaka popup nnyocha na nwale usoro nke ngwá ọrụ breakage nwere ihe ịga nke ọma na ngwaahịa na ngwa, ka ghọtara na-ewelite larịị nke igwe ngwá ọrụ akpaaka larịị na nlekota ngwaọrụ.
2.how banyere Nga sales support?
Nga sales support
1, n'efu nye ọrụaka ngwọta maka ndị ahịa. Iji nye ndị ahịa na nke kacha mma na nhazi plan, gụnyere igwe ngwá ọrụ nhọrọ na nhazi, oru oma nhazi technology, ngwá ọrụ nhọrọ, ịcha kwa, akụkụ arụ ọrụ ọtụtụ awa, Chuck nhọrọ na ọrụ ndị ọzọ.
2, dum usoro nsuso, na-aza nsogbu okosobode site na ndị ahịa na ojiji nke ngwá, na-enye na nso nke oru ọrụ ma na-akwado maka ndị ahịa.
3, free nke ụgwọ ahịa rụọ iji nye ọzụzụ. Ọzụzụ ọdịnaya gụnyere igwe ngwá ọrụ ọrụ, mmemme, mmezi na na, ya mere, dị ka iji hụ na ọkà n'iji igwe ngwaọrụ.
4, enye free igwe echichi na Jizọs na-ezipụ maka ndị ahịa, site ọhụrụ Ankai Corporation injinia na njem nke ndị ahịa ẹkedọhọde ebe, na dị na ọhụrụ ngwaahịa nabata nkọwa maka echichi nke Ankai ụzọ maka ndị ahịa na-enye na-na saịtị echichi na ule igwe ọrụ, iji hụ na ahịa na-azụ ihe na ngwaahịa pụrụ ozugbo-eji, na-ezu igwe nnyocha nkwenye ọrụ.
3.how banyere mgbe-ire ọrụ?
Nga ire ọrụ
> Nye lathe nlereanya nhọrọ maka ahịa na iwebata banyere atụmatụ na uru nke ọ bụla nlereanya. Nwere ike ikwu kasị kwesị ekwesị nlereanya ka ahịa nke a kasị na-eri-oru oma plan.
> Nye kasị ọkachamara technology analysis, na-edozi nsogbu nke ndị ahịa okosobode na mmepụta, ka ahịa na-echegbu onwe-free.When mkpa Anyị ga-enyere aka ahịa na rụchaa samples mgbe ọ dị mkpa.
Anyị ga-enye free echichi, ọzụzụ ije ozi mgbe azụtara maka ndị ahịa iji jikwaa igwe na-etinye na mmepụta ngwa ngwa.
Tupu anyị injinia na-abata na gị na ụlọ ọrụ maka echichi na debugging ọrụ, biko inwe njikere maka ndị na-esonụ preparations, nke mere na anyị injinia nwere ike were were na rụọ ọrụ nke ọma ga-esi n'ime ọrụ mgbe mbata.
1. Kwadebe atọ-adọ 380V ike ọkọnọ na ala waya, na-edu ha a ọnọdụ n'akụkụ igwe ngwá ọrụ na-n'ịnyịnya site a 2.5mm2 waya, nke mere na anyị injinia ike ijikọ ha igwe ngwá ọrụ mgbe mbata, na-enye ike igwe ngwá ọrụ.
2. Kwadeb'obi 0.5mpa ikuku mgbali dị mkpa maka nkịtị ọrụ nke igwe ngwá ọrụ, jikọọ ya a ọnọdụ n'akụkụ igwe ngwá ọrụ site na a φ8 ikuku ọjà.
3. Kwadebe ịcha mmanụ (dị ka Ross ọcha ọnwụ mmanụ A12) zuru ezu maka machining usoro nke nkenke akpaka lathe.
4. Kwadebe igwe ngwá ọrụ n'ígwè mmanụ (dị ka Ross A32).